पूर्व माओवादीहरुको गुनासो : डुबायो–डुबायो ! – Palika Times
पत्रपत्रिकाबाट राजनीति समाचार
पालिका टाइम्स १६ असार २०७८, बुधबार प्रकाशित
१६ असार, काठमाडौँ। रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापासहित एमालेमा रहेका पूर्वमाओवादीहरु केपी ओलीसँग नपाइने कुरा माग्दै दिन बिताइरहेका छन् । उनीहरुको माग छ, ‘पार्टीको नाम एमाले नै राख्ने कुराले हाम्रा साथीहरुमा अलिक समस्या आयो । यसलाई फेरौँ †’ केही दिनअघि ओलीसँगको भेटमा टोपबहादुरले त भने पनि, ‘हामीले देशलाई प्रचण्डमुक्त बनाउन चाहेका हौँ । त्यसैले सानातिना कुरामा नअल्मलिऔँ !’ केपीले सोध्नुभयो, ‘के हो सानातिना कुरा ?’ प्रभु साहले भने, ‘नाम मिलाउने, जबजलाई हिजो एकतामा जाँदा भनिएजस्तो जनताको जनवाद भन्ने …।’ यति कुरा सुनेपछि केपी मज्जाले हाँस्नुभयो र भन्नुभयो, ‘हामीले एमाले र जबज छोड्ने ? हामीले छोडेपछि माधव नेपालले लगिहाल्छ नि यस्तो हुँदैन, नो चान्स…!’
प्रदेश २ मा धेरै मान्छे फर्किने भए भन्दै प्रभु साह विलौना गर्दैछन् । तर, उनै प्रभुको सूची सबभन्दा ठूलो छ । उनले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का लागि दुई सयभन्दा बढीको नाम बुझाएका छन् । सबै गरेर पूर्वमाओवादीले पाँच सय साठी जनाको नाम बुझाएको छ। जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
आफ्ना कार्यकर्ता पोस्‍न गण्डकी सरकारले गर्‍याे १६ करोड रकमान्तर !